प्लस टुमा के पढ्ने अभिभावकलाई हैन, आफैँलाई सोधाैं ! « Naya Page
प्लस टुमा के पढ्ने अभिभावकलाई हैन, आफैँलाई सोधाैं !
प्रकाशित मिति :3July, 2018 8:54 am
-एलपी भानु शर्मा, प्राध्यापक, पोखरा विश्वविद्यालय
भर्खरै कक्षा १० (एसईईको) परीक्षाफल आएको छ । परीक्षाफलमा जो उत्तीर्ण भए उनीहरुले अगाडिको यात्रा कसरी गर्ने रु अध्ययनको विषय कसरी छान्ने ? आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी चिन्ने रु अहिलेको महत्वपूर्ण पाटो यही हो ।
जुम्ल्याहाँ नै भए पनि उनीहरुको रुचि, आदत, स्वभाव, भिन्न हुन्छ । एउटै घटनालाई बुझ्ने तरिका व्यक्तिपिच्छे अलग हुन्छ । त्यसकारण हरेक कर्म गर्दा हामीले आफ्नो स्वभाव, विचार, तथा रुचिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ । विषय छनोट गर्ने जम्मा तीन तरिका छन् ।
अरूको प्रभावबाट बँच्ने
आफ्नो स्वभावलाई अरूको प्रभावमा परेर आफूले आफूमाथि अन्याय गरिरहेका हुन्छौं । अहिलेका किशोर–किशोरीलाई आफूअनुसारको व्यवहार लाद्न खोज्छौं । यो गलत हो ।
त्यसैले अहिले एसईई उत्तीर्ण गरेर उच्च शिक्षाको तरखरमा रहेका विद्यार्थीले अरूको प्रभावबाट बच्नुपर्छ । पहिले आफ्नो स्वभावको पहिचान गर्नुपर्छ । कसैले विज्ञान पढे राम्रो हुन्छ अथवा व्यवस्थापन पढ् ह्युमानीटिज पढ् भने अथवा बजारको माग यो छ यही विषय पढ् भने भनेर प्रभावमा पर्नु हुँदैन । यतातर्फ ध्यान गयो भने भावी जीवनमा प्रभावमा पर्छ । यसको नतिजा सकारात्मक आउन्न ।
अरूको प्रभावमा परेर क्षमताभन्दा बाहिर जाँदा आउने नतिजा दुःख नै हो । बजारमा कुन विषय चल्छ त्यतातर्फ नहेरौँ आफू कुन विषयमा राम्रो गर्न सक्छौँ त्यो हेरौँ । स्वभावलाई हेरौँ आफूतिर र्फकिउँ ।
विषय जम्मा तीनवटा हुन्छन् । सत्यम सुन्दरम र अर्को सुन्दरम् । अध्ययनको सिलसिलामा यदि आफूलाई सत्य खोज्न मन पर्छ भने विज्ञान, न्याय निसाफ गर्न मनपर्छ भने कानुन, नयाँ कुरा थाहा पाउन मनपर्छ भने दर्शनशास्त्र पढ्नुपर्छ ।
दोस्रो शिवम् यसको अर्थ हुन्छ भलाइ, कल्याण तथा सेवाभाव । आफ्नो र अरूको हित खोज्ने प्रवृत्ति, सेवाको माध्यमबाट केही गर्छु, अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, यस्तो काम गरे जगत्को हित हुन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले राजनीति, समाजशास्त्र, साहित्य, संगीत तथा कला रोज्नुपर्छ ।
सुन्दरम्’ समाज व्यवस्थालाई हिजोभन्दा आज राम्रो बनाउने सोच । हरेक कुरा व्यवस्थित गरौँ भन्ने लाग्छ भने यस्तो सोच भएकाले वाणिज्य शास्त्रका विषयहरु पढ्नुपर्छ ।
बजार हेरेर उपदेश दिने व्यक्तिको अनुहार हेरेर उच्च शिक्षाको विषयमा निर्णय लिन हुँदैन । आज मनोविज्ञानले के भन्छ भने सही विषय छनोट नगरेको कारणले पूरै संसारभरि शिक्षित व्यक्तिहरुमा तनाव छ । आफ्नो हृदयले रोजेको र पढेको विषय फरक हुँदा दुःख पाउनेहरु धेरै छन् । एक तिहाईभन्दा बढी तनाव हाम्रो जीवनमा गलत विषय छनोट बाट जन्मिन्छ ।
हामी किशोर–किशोरीलाई अनावश्यक तनाव दिने गर्छौँ । डाक्टर बन्नैपर्छ, इन्जिनियर बन्नैपर्छ भनेर दबाब दिन्छौं । भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर विषय चयन गर्नुभन्दा क्षमताअनुसारको विषय रोज्नु बुद्धिमानी हो । दबाबमा चयन गरेको विषयमा सन्तुष्टी हुन्न । सन्तुष्टी नभएपछि मन विचलन हुन्छ । कामचलाउ गर्ने बानीको विकास हुन्छ । जसले आफैँलाई ठग्न थाल्छ उसको स्वभावै त्यही बन्छ र बाँकी यात्रा पनि कामचलाउ गर्दै बित्छ ।
कुन विषय पढ्यो भने राम्रो काम पाइएला भनेर हामी अहिले पनि सोध्छौँ । यो राम्रो स्वभाव हैन । सोध्नुपर्ने प्रश्न कुन विषय पढेँ भने आफूभित्रको स्वभाव, भित्रको आदत, व्यवहारलाई अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।
के पढ्दा आफू आफैं जस्तो हुन सकिन्छ रु कुन विषयमा उच्च शिक्षा लियो भने आफ्नो अभिव्यक्तिसँग मिल्दो जुल्दो हुन्छ त्यो सोध्नुपर्छ ।
जुन समस्या समाधान गर्दा मज्जा आउँछ त्यही छान्ने
केही बेर चिन्तन गर्ने । यो समाजका समस्याहरु के–के छन् विचार गर्ने । ती समस्यामध्ये कुन समस्या सामाधान गर्दा आफूलाई मज्जा आउँछ आनन्द आउँछ त्यही विषय छानौं। जुन समस्याको सामाधान गर्न आफू जन्मेको हुँकी जस्तो लाग्छ त्यही छान्ने गर्नुपर्छ, यस्तो भएपछि पढ्न बढो मज्जा आउँछ । हरेक दिन आनन्दका लागि अध्ययन गरिन्छ र सफल पनि भइन्छ । त्यहीअनुसारको मित्रता गाँसिँदै जान्छन् । ज्ञान र अनुभवको दायरा फराकिलो हुँदै जान्छ ।
कक्षा ११ मा अध्ययनको विषय छान्नु अगाडि कक्षा १० सम्म पढ्दाको अवधिको मूल्यांकन गर्ने । मार्कसिट हेर्ने । त्यतिबेला कुन विषय पढ्दा आनन्द आयो त्यो हेर्ने । सामाजिक शिक्षा, नेपाली, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के पढ्दा मज्जा आउँथ्यो, कुन क्लास रमाइलो हुन्थ्यो पहिचान गर्ने । त्यसले भावी शैक्षिक यात्रा तय गर्न सहज हुन्छ ।
आफ्ना छोराछोरीलाई चिनौं
धेरैजसो अभिभावकले छोराछोरीलाई के पढाउने भनेर सोध्ने चलन छ । यो सन्तानको जीवनको अपमान हो । गुणात्मक क्षमता भएको मान्छेले यस्तो प्रश्न गर्दैन । छोराछोरीलाई यो विषय पढ्, यो काम गर, योसगँ विवाह गर भनेर नसोधी निणर्य गर्ने चलन छ । उसलाई स्वतन्त्र भएर उसको जीवन बाच्न दिने चलन छैन ।
यस विषयलाई संवेदशील आँखाले हेरौँ । सजिलो हैन सहज खोजाैं । आजको युगको अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई चिनेको छैन भने कसरी अभिभावक भयो ? जन्माएर मात्र हुँदैन बच्चाको खुबी इच्छा पनि चिन्न सक्नु पर्छ । एउटा गलत भावले सयौं गल्ती हुन सक्छन् त्यसैले यस्तो गल्ती नगरौँ । एकअर्कालाई चिन्ने बुझ्ने गरौं ।
९० प्रतिशतमा विद्युत पहुँच
आयुर्वेदिक औषधिले कोरोनाका संक्रमित छिट्टै निको
काठमाडौं, ३१ साउन । मुलुकभरमा ८६.४४ प्रतिशत घरपरिवारमा राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीको विद्युत पुगेको छ ।
काठमाडौं, ३१ साउन । कोभिड–१९ सङ्क्रमणले देशभरि सञ्जाल बिस्तार भएको नेपाल टेलिकमको आम्दानी पनि प्रभावित
काठमाडौं, ३१ साउन । आयुर्वेद चिकित्साप्रति मानिसको विश्वास गुमिरहेको समयमा कोरोना सङ्क्रमण भएका बिरामीलाई भने